ब्रेकअपपछि अर्कै युवको प्रेममा छिन् वर्षा ? - dautarimedia.com
ब्रेकअपपछि अर्कै युवको प्रेममा छिन् वर्षा ?
कलाकारका फेसन, प्रेम र रोमान्सका गसिपले सधैँ चर्चा पाउने गर्छ । यसैक्रममा पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रमा चर्चाको विषय अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी र अभिनेता राज कटुवालको प्रेम सम्बन्ध भएको छ ।
दुवैले खुलेर प्रेम स्वीकार नगरे पनि उनीहरू प्रेममा रहेको कुरा भने लुक्न सकेको छैन । गत वर्ष एकसाथ होली मनाएपछि प्रेममा रहेको चर्चा चलेका यी दुवै मिडियामा भने आफूहरू राम्रो साथी रहेको बताएका छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको पोस्ट नियाल्ने हो भने दुवै बिच प्रेम रहेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।
तस्बिरमा वर्षाले राजको छातीमा आफ्नो शिर राखेर खुसीको मुस्कान छाडेको देख्न सकिन्छ । जुन तस्बिरबाट पनि उनीहरू प्रेममा रहेको जो कोही ले अनुमान लगाउन सक्दछन् ।
खुला रूपमा प्रेम स्वीकार गर्न बाकी भएपनि यो जोडीले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भने प्रेम व्यक्त गरिरहेका छन् । केही अगाडि वर्षाले राजसँग भिडियो कलमा कुराकानी गर्दाको स्क्रिन सट इन्स्टामा राख्दै राजले आफूलाई सधैँ खुसी दिने प्रयास गरेको बताएकी थिइन् ।
अमेरिकामा बस्ने सविनजंग थापासँग ब्रेकअपपछि वर्षा राजसँग नजिकिएकी हुन् । अभिनेत्री पूजा शर्माको माध्यमबाट यी दुवै नजिकिएको बताइन्छ । अहिले दुवैले विवाह प्लानिङ गरेको फिल्म क्षेत्रमा चर्चा छ ।
Previous: एसईई नतिजा प्रकाशित
Next: अटोलाई रुखले किच्दा एक महिलाको मृत्यु, पाँच जना घाइते